» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १५
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १५
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १७:३२
मकवानपुर, १३ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । यस भिडियो सिरिजमा हामी नेपाल स्टारको अडिसन राउण्डबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भिडियो सिरिजको पन्ध्रौँ भागमा धनगढी अडिसनबाट छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरु बिनोद थापा, विशाल कुँवर र दुर्गा ताम्राकारका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
७) बिनोद थापा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका सातौँ प्रतियोगी हुन् बिनोद थापा । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ निवासी बिनोदले अडिसनमा ‘बाबुको जुंगो’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकहरुको मन जितेका उनले दोस्रो पटक ‘यो गजल हो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
८) विशाल कुँवर– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएका आठौँ प्रतियोगी हुन् विशाल कुँवर । टिकापुर कैलालीका विशालले यसअघि पनि केही सांगितिक प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएका थिए । उनले अडिसनमा ‘रित्तो रित्तो छु म’ बोलको गीत गाएका थिए । निर्णायकहरुले अर्को गीत गाउन लगाएपछि उनले ‘कर्णालीको भेल’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतपछि दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
९) दुर्गा ताम्राकार– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि धनगढीबाट छानिएकी नवौँ प्रतियोगी हुन् दुर्गा ताम्राकार । उनले अडिसनमा ‘फलाम खानी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएकी हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।